Beentii Sheekh Umul-dhurwaa oo meel gaari weysay iyo Video qeexaya labada Xayawaan ee uu isku khaldayo.
Waa qoraal qiima badan oo ka hadlaya Waraabaha dadka lagu waalay inuusan ahayn ka Axaadiistu sheegeyso. Waraabaha Nacaska ah ee ay Kutubadu qoraan Ilka korana ma leh waxna ma cuno meelahaasuu lufluftaa sida uu u ciyana waa si masaakiinimo ah oo aad moodeysid neef adhi ah. Intaasoo dhan waxaad ka daawan kartaa 2 video ee qoraalka la socda.
Haddaba si loogaga digo Fasahaadka ay wadaan Nimanka duubka soo xirtay ee u shaqeeya Quruumo kale Jeegaga bilaashka ka qaata Dowlada shisheeye waxaa habboon in diinta la barto.
Haddaad la qadiyad iyo Madhab tahay Nimanka wareersan fadlan sheekh baan ka maqlay iyo cajalad baan dhegeystay iyo Sheekh hebelbaa yidhi Aakhiro kaa saari mayso wax hubso! Shiikhu ma Nebibaa! Aawaay Culumada Wareersan ee Quraanku ka hadlayo? aaway kuwa Axaadiistu ka hadlayso? FAdlan ha noqon CALL BOX wax lagu shubto ee samee Baxthi ama baaritaan ku saabsan waxyaabaha maanta dadka lagu wareeriyey Waxaad u tegi doontaa InshaAllaahu sida la yaabka leh ee ay Gaaladu madhabtan la yaabka leh ee Wahaabiyada ay u sameysay ka dib markii Khaliifadii Cusmaaniyada ay jebiyeen IBN SACUUD, IBN C/Wahaab oo INgriisku la daba taagnaa Hub iyo Lacag.
Waxaa Naseexo iyo Taariikh kuugu filan filinka arrimahaan ka hadlaya ee la yiraahdo LAWRANCE OF ARABIA. Ama akhri Kutubtii ay ka qoreen Culumadii Islaamka ee joogtay Xilligii Masiibadani dhacaysay oo ku beegnayd Qarnigii 18-aad..250 sanadood horteed. Intaa haddii aad diiday bal akhri Kitaabada ay Qorteen Ina C/Wahaab(Aasaasihii Firqada Wahaabiyada) oo uu arrimahaas oo dhan kaga hadlayo , kuwaas oo kala ah Kitaabu Tawheed, Kashfu shubahaat ama kan ka hadlaya Taariikhdaas oo dhan ee la yiraahdo Ciwaanu Al-Majdi fii Taariikhu Najdi!!!!!!!!!
Najdi waa meesha haatan loo yaqaan Riyaad waana meeshii uu Suubanahu(scw) habaaray ee uu yidhi Gees Sheydaan oo Fidno ummada halaagta ayaa ka soo bixi doonta........
Dhamaan Culumadii Islaamka ee Waqtigii Mohamed Ibn C/Wahaab joogtay waxay isku raaceen Fidnadii Suubanahu(scw) sheegay inuu ahaa Ina C/Wahaab oo ah aasaasihii Khawaarijta Casriga ee loo yaqaano Wahaabiyah!!!!!! Wuxuuna ku caan baxay Naaneysta ah "Sheekhu Najdi"...
Fana kacuudi Billaaaah!
Waraabaha Culumada Islaamku sheegeen in la cuni karo Axaadiistuna sheegtay
Waraabaha Khabiithka ah ee Micidiisa ku ugaarsada Bakhtigana Cuna ee Sheekh Umul- Dhurwaa Xalaaleeyey isaga oo Xaaraam ah. Bal si fiican u fiiri Waraabaha Sheekh Umul-dhurwaa Dadka u xalaaleeyey Qaabkiisa iyo sida uusaan marnaba ugu ekeyn kan Culumada Islmaaku isku raacday marka laga reebo Umuldhurwaa iyo Xulufadiisa ku caanka baxday ka beensheegidda iyo ka ganacsiga Diinta.
Faadumo Samatar qidmiir@yahoo.co.uk